Oko Kuthatha Ngokwenyani ukuze uLacquer Iindonga zakho - Iingcebiso Zomyili
Oko Kuthatha Ngokwenyani ukuze uLacquer Iindonga zakho
Yintoni eyenza ukuba igumbi elingentla libe lelikhethekileyo? Ngaba ngumbala opeyinti obomvu osisityebi ezindongeni, ubugcisa beqwarhashe obumnandi, iimfumba zeepateni, intelekelelo yokuba nelayibrari ekhayeni lakho? Inyaniso, zizizo zonke ezo zinto- kodwa eyona nto iphambili kuzo ziindonga ezimenyezelayo ezimangalisayo, ezibonisa ubugqi.
Ingubo yepeyinti ye-lacquer yimfihlo yokwenza oku kukhazimla, kwaye imveliso ikulungele ukudala ubunzulu, umdla kunye nokukhanya okungaphezulu kwigumbi; Ukukhanya kwelanga, amakhandlela, kunye nezibane zihamba kakuhle. Umyili uPhillip Thomas wenza igumbi elingasentla, elalibonakaliswe kwimagazini kaMatshi Indlu entle (jonga ukhenketho olupheleleyo apha ), ke wayengumntu ogqibeleleyo wokuchaza ukuba ungafumanisa njani ukuba ukubonakala kwe-lacquered kukulungele.
nasa imifanekiso yendawo
Okokuqala, ngaba i-lacquer yile nto uyifunayo?
'I-Lacquer yinkqubo endala efuna iingubo ezininzi zeepeyinti, iidyasi ezisi-7 ukuya kwezi-12, apho ufaka khona, polisha, faka isicelo, polisha ukwenza eli qokobhe lingakholelekiyo ezindongeni,' uyacacisa uThomas. Olo hlobo lwe-lacquer ayenzi kuthetha ukukhanya okuphezulu. ' I-lacquer yokwenyani isekwe kwisinyibilikisi, kwaye isebenza ngokungathi yokwaleka eludongeni okanye kwifenitshala, enje nge-shellac-yenza ifanitshala yomelele ngakumbi ngelixa ikwabonelela ngexabiso elithile. Kodwa ngenkangeleko engentla, wasebenzisa ipeyinti ebengezelayo (uBenjamin Moore's uLadybug Red, ukuba achane ngqo).
izimvo zokuhombisa izindlu zangasese
'Abantu bacinga ukuba i-lacquer ihlala i-gloss ephezulu, kodwa inokuba yi-satin okanye ibe mbumbulu kunoko,' uqhubeka. 'Kukho iipeyinti ezimangalisayo, endicinga ukuba ziindlela zoqoqosho ngakumbi zelo lacquer.' Ukuba ufuna iindonga ezibengezelayo, ipeyinti ebengezelayo inokuba yimveliso oyifunayo.
Zeziphi ezinye iimveliso eziqinileyo?
UThomas uyinxalenye yemigca emithathu yeemveliso zabo ezinobukhazikhazi obuphezulu: UBenjamin Moore, iipeyinti ezintle zaseYurophu ('Banepeyinti entle ebizwa ngokuba 'Hollandlac' , onokuyifumana kwisheens ezininzi, 'uyaphawula), kunye neFarrow kunye neBhola' yepeyinti yevaranda. '
Umbala wepeyinti 'utshintsha' ngalo lonke usuku Ungayikhetha njani ipeyinti echanekileyo kwigumbi ngalinye
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Indlela yokuYila iiNdawo zale mihla ezingaziva zibanda
Iindlela ezingama-27 zeGenius zokuKhulisa indawo encinci
Ungalihlaziya njani iKhaya oKhulele kulo Uyenza njani indlu yakho yokuqala ukuba ibonakale ikhulile
Amacebo oYilo lweSmart yendawo yakho yangaphandleYenzelwe i- Ukusuka Kwindlu Ehle for Yenziwe yiNdlu entle yeUkuhombisa iDen Khuthazwa zezi 11 zeMibono yokuYila kweSibhakabhaka
Iglasi egciniweyo yeWindows ipholile kwakhona
Iimpazamo zeGumbi lokuPhila ezili-17 ngokuya kwabaYili
Isikhokelo sakho sokuGcina ukuDala uLudonga oluPhila
Abaqulunqi bePeyinti abaPhezulu abaPhezulu baHamba ngaphezulu
Ngaba iindonga zegalari zigqithile?
Nantsi indlela ekufanele ukuba upeyinta ngayo isilingi sakho
Ukunyamekela iiNdonga eziPeyintiweyo
Iindlela ezili-19 eziDibeneyo zokuHombisa iiNdonga zegumbi lakho lokulala
iingcango zeshawari kwindawo yokugcina ikhaya
Izimvo ezingelutho kwigumbi lokulala
izindlu ezivela kwizikhongozelo zokuhambisa
charlie brown umbulelo owonwabileyo